Cumbia, laxanka dhaqameed ee Kolombiya | Safarka Absolut
Shaki la'aan laxanka miyuusigga inta badan ku xiran Colombia, dhaqankeeda iyo dadkeedaba, waa cumbia. Ma jiro xaflad ama dabaaldeg waddankan ka mid ah oo kooxuhu aysan ka dhawaajin oo u dheelin dhawaqa Colombia cumbia. Astaan ​​astaan ​​u ah aqoonsigeeda qaran.
Noocan muusikada ah ee xiisaha leh iyo qoob-ka-ciyaarka dadweynaha wuxuu ku dhashay xeebta Kariibiyaanka, laakiin si dhakhso leh ayuu caan ugu noqday waddanka oo dhan. Qoraalkan waxaan kaala hadli doonnaa asalkiisa, dhaqamadiisa iyo waxyaabo kale oo badan oo la xiriira kumbuyuutareedka Kolombiya.
1 Asalka cumbia Colombia
2 Colombia cumbia: qalabka
3 Colombia cumbia: dharka dhaqanka
4 Colombia cumbia: qoob ka ciyaarka
Asalka cumbia Colombia
Sida farshaxanno kale oo badan oo farshaxan iyo dhaqameed adduunka ah, cumbia waa natiijada isku dhafka. Si aad u raad raacdo asalkeeda waa inaad u safartid qarnigii XNUMXaad, xeebta Atlantic ee hadda loo yaqaan Colombia. Waxay ahayd halkaas in xubno cunsuriga ka mid ah saddex dhaqan aad u kala duwan: the Dhalad Mareykan ah, ka Yurub (gacanta Isbaanishka gacanta) iyo kan africana, oo ay keeneen addoommadii loo keenay adduunka cusub.
Magaalo kasta ama dhaqan kastaaba wuxuu ku darey cunsur ka duwan. Laxamku wuxuu ku salaysnaan karaa laxanka aborijiniska, halka mawduucyada iyo ereyada heesaha ay si cad u leeyihiin xididdada Isbaanishka. Ugu dambeyntiina, halyeeyga ee muusikada iyo cayaaraha Afrika Waxay dhammeeyeen habka cuntada ee aakhirka u soo bixi doona cumbia-ka reer Colombia.
Oo kanu waa sida natiijadan cajiibka ah ee isku dhafka hodanka ah iyo kala duwani ku dhalatay.
Cumbia waa laxanka miyuusigga ugu caansan Colombia
Si kastaba ha noqotee, the Asalka asalka ah ereyga 'cumbia' uma muuqdo mid saafi ah. Culimada badankood waxay difaacaan inay ka timid ereyga kumbe, oo macnaheedu yahay "xisbi" ama "dhawaq" dhowr luqadood oo Afrikaan ah.
Waxa shaki ku jiro waa guusha cajiibka ah ee hal-abuurnimada, taas oo laga soo bilaabo halkii ay ku dhalatay ee Kolombiya ku faafay sannadihii u dambeeyay dalal kale oo badan oo ku yaal Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Cumbia hadda waa laga heesaa oo waxaa lagu dheeshaa meelo aad uga fog sida Mexico, Peru, El Salvador, Venezuela, Argentina ama Peru.
Colombia cumbia: qalabka
Mar labaad ruuxa seddexaad (Ameriyanka, Yurub iyo Afrikaanka) ee qumbaha ayaa si fiican uga dhex muuqda qalabka muusikada taas oo loo adeegsado in lagu fasiro.
Doorka hogaaminta ayaa shaki la'aan ah qalabka garaaca. Laxanka ee durbaan, Ku-biirinta dhaqanka Afrika, waa laf-dhabarta curinta oo dhan. Waxay dejiyaan laxanka ugu weyn waxaana caawiya qalabyada wadaniga ah sida qasacad masago ama Baasbooyin, asal ahaan Isbaanish aan shaki lahayn.
Caña de millo, aaladda aasaasiga ah ee reer Colombia cumbia
Cumbia waxaa jira saddex nooc oo ah durbaan ugu muhiimsan:
El Drum Farxad leh, kaas oo lasocda laxanka heesta.
El Wicitaanka Drum, taas oo loo adeegsado in lagu dejiyo muuqaalka taageerada heesta.
La Tambora. Kani waa midka kaliya ee durbaannada cumbian-ka ah oo aan lahayn asal ahaan Afrika. Waxaa lagu dhufan gacanta, iyada oo aan loo isticmaalin durbaano, maqaarka iyo sanduuqa alwaaxba.
Waxa kale oo jira saddex nooc oo ah Baasbooyin:
Bacpipe lab ah, oo u eg sida asalka.
Bacaha dumarka, oo la socota laxanka.
Bacaha gaagaaban, oo loo isticmaalo aalad keli ah oo caan ku ah qaybaha kaliya ee qalabka.
Cañamillero waa waxqabad muhiim u ah koox kasta oo reer Colombia ah. Isagu waa kan taabta Millo qasacad ah, aaladda dabaysha oo muuqaalkeedu u eg yahay biibiile wareegaya. Sida magaceedu tilmaamayo, waxaa lagu sameeyaa bakoorad masago, laakiin sidoo kale waxaa laga samayn karaa laf ama xitaa bamboo. Maracas, waardiyaha iyo qalab kale oo sare ayaa sawirka dhameystira.
Colombia cumbia: dharka dhaqanka
Cumbia maahan bandhig muusig, laakiin sidoo kale waa muuqaal muuqaal ah. Marka dhinacan laga eego waa halka ay dhaantadu farageliso dhar dhaqameed midabkoodu kala duwan yahay. Dharka loo isticmaalo cumbia ayaa sidoo kale loo isticmaalaa qoob ka ciyaarka kale ee caadiga ah ee reer Kolombiya.
Dharka caadiga ah ee reer Colombia cumbia
Naagta: costumber ayaa amar ku bixiya in dhaantada ay xidhaan dharka cad ee caadiga ah ee goonada ama goonada ballaadhan leh. Tan waxaa lagu sharraxay ribbimo iyo, had iyo jeer, bolero si loo muujiyo midabada calanka Colombia (jaalle, casaan iyo buluug). Waxay sidoo kale xirtaan jaakado leh gacmo ballaadhan laakiin taasi waxay dhaafaysaa garbaha qaawan.
Ninka: dharkooda ayaa aad uga fudud. Waxay ka kooban tahay surwaal cad iyo shaati iyo, si loo siiyo taabasho midab ah, shaar cas oo loo yaqaan "dabada diiqda." Qaybta aasaasiga ah ee labka lab waa dhaqanka koofiyad vueltiao.
Dhammaan faahfaahinta iyo qurxinta dharkaani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan fulinta qoob-ka-ciyaarka cumbia.
Colombia cumbia: qoob ka ciyaarka
Waxaa jira dhowr nooc oo qoob-ka-cayaar iyo choreographies oo ku xiran kumbuyuutarka Colombia. Kuwani waxay matalayaan gaar ahaan mid qoob ka ciyaar shukaansi. Ragga iyo haweenku masraxa ayey ka soo galaan xaglo ka soo horjeedka. Kadib waxay isugu yimaadaan xarunta waxayna ku ciyaaraan midba midka kale si loogu garaaco durbaanka. Fiidiyowgaan waxaan ku leenahay tusaale qurux badan qoob-ka-ciyaarkaan:
Waxaa ka mid ah hababka gobolka ama noocyada kala duwan Kuwa ugu caansan ee reer Colombia cumbia waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Cumbia caadiga ah, looma heesin. Qalab saafi ah.
savanna cumbia, kaas oo lagu isticmaalo qalab aad u gaar ah oo la yiraahdo liin dhanaan. Waxaa lagu dhaansaday waaxaha Sucre, Córdoba iyo Bolívar.
cumbia vallenata, kaas oo ay ka qayb gasho qalab (qalabka ugu caansan ee vallenatos). Qeybtan hoose ee Colombian cumbia gudaheeda waxaa jira noocyo badan.
Cumbiamba. Waxaa loogu cayaaraa qaab qoob ka ciyaar ah oo aad u muuqda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Cumbia, laxanka dhaqameed ee Kolombiya
Cumbia, oo ah qoob-ka-ciyaarka caadiga ah ee reer Colombia, waxaa ku dheeli kara koox ka kooban afar haween ah ama xinjirku waa lagama maarmaan.
che que vuena pag ee Argentina waxay na dhigeen si aan wax uga ogaanno cumbia waxa fiican pag
Ku jawaab nati melcon